Global Voices teny Malagasy » Maraoka : Fahafatesan’i Driss Basri, ilay ”mpivaro-kena” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2018 12:25 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika (fr) i Claire Ulrich, imanoela fifaliana
Sokajy: Maraoka, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Septambra 2007)
Olona nanana ny maha-izy azy tao Maraoka i Driss Basri, nantsoina hoe ”Ilay mpivaro-kena”. Manamboninahitra tao amin'ny polisy no niantombohany ary voatendry ho Minisitry ny Atitany tamin'ny 1979 teo ambanin'ny fitarihan'ny Mpanjaka Hassan II. Nitàna izany toerana izany nandritra ny 20 taona izy, izay fotoana niampangàna azy ho nampijaly sy nanagadra olona an'arivony maro nanohitra ny fitondram-panjaka.
Ireny taona ireny, fantatra tamin'ny anarana «taonam-piraka ” dia nifarana rehefa tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 1999 ny Mpanjaka Mohamed VI. Noroahany avy hatrany i Basri, izay nanao sesitany ny tenany tany Parisy toerana nahafatesany tamin'ny Alatsinainy [27 Aogositra] teo amin'ny faha-69 taonany. Araka ny loharano sasany, nikasa ny hiverina tao Maraoka talohan'ny nahafatesany i Basri. Namela mananontena iray, ny zanany lahy telo ary vavy roa izy.
Isankarazany ny hevi-bahoaka maraokana momba an'i Driss Basri, hatramin'ny mponina ao amin'ny tanàna nahaterahany tao Settat, izay manome voninahitra azy noho ny fivoarana nentina ho an'ity faritra ity, ka hatramin'ireo manaratsy azy noho ny herisetrany. Manolotra fanehoankevitra mitovy amin'izany ihany koa ireo blaogera maraokana.
Manambara tsotra izao ny Blaogin'i Amina Talhimet :
Maty tao Paris noho ny aretina nitaiza azy hatry ny ela i Driss Basri, ny Minisitry ny Atitany teo aloha. 69 taona izy izay lasa izay. Toy ireo fifidianana tamin'ny taona 2002, hotanterahina tsy misy azy ihany koa ireo ho atao amin'ny 2007. Tsy misy zavatra hafa anampiana izany. Raha tsy hoe ny faharesen-dahatra fa ho kihondalana manantantara ho an'ny sehatra politika eto amin'ny firenentsika ny fifidianana izay ho atao ny 7 Septambra 2007. Noho izany, andeha isika hifidy ho an'i Maraoka.
Manoratra (arabo] i A Moro in America  :
Mety hoe manamarika ny tena faran'ny taonam-piraka ary fiandohana vaovao ho ana Maraoka tanora tarihinà Mpanjaka tanora ny fahafatesan'ilay lehilahy maherin'i Maraoka nandritra ny fitondran'ny mpanjaka Hassan II, ho ana firenena iray izay ny ankamaroan'ny vahoaka dia tanora loatra tsy afaka hahatakatra ny vanim-potoanan'i Driss Basri izay mifarana ankehitriny.
Pour ceux qui tiraient leur pouvoir du nom de Al Basri, il est mort. Et pour ceux qui le poursuivaient pour son argent, pour une patente de taxi ou d’autocar, eh bien, il est maintenant dans un autre monde. Nous vivons maintenant l’ère des institutions, qui est meilleure, plus fiable et plus sûre qu’une société dirigée par des individu : le Palais, le Parlement, les municipalités locale, et un système judiciaire qui garantit la transparence et l’égalité de tous les Marocains. Le Maroc deviendra un meilleur pays, par la volonté d’Allah.
Mety ho fankaherezana ho an'ny tanorantsika izany mba hirotsaka ao amin'ny sehatra politika, izay mitantana ny fiainantsika, na ekentsika izany na tsia.. Ho an'ireo nahazo ny fahefany avy amin'ny anaran'i Al Basri, maty izy. Ary ho an'ireo nanenjika azy ho an'ny volany, ho ana fahazoan-dalana amin'ny fiarakaretsaka na fiarabe, dia izao izany, efa any amin'ny tontolo hafa izy. Miaina ny vanim-potoanan'ny andrim-panjakana isika izao, izay tsara kokoa, azo itokisana sy azo antoka kokoa noho ny fiarahamonina tantanin'ny olona : Ny Lapa, ny Parlemanta, ny antenimieran'ny tanàna eo an-toerana, sy rafi-pitsarana izay miantoka ny fangaraharana sy ny fitovian'ny Maraokana rehetra. Ho firenena tsaratsara kokoa i Maraoka, amin'ny sitrapon'i Allah.
Manontany tena i Ghasbouba  raha toa ka mety na tsia ny mamela heloka an'i Basri.
Maty i Driss Basri…
Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany.
Mihevitra ny Maraokana fa tsy azo atao ny milaza zavatra ratsy momba ny maty ary tokony hankatoavintsika ireo didy lehibe mibaiko hoe ; « Aza milaza afa-tsy zavatra tsara momba ny matinao ». Zavatra mbola tsy mety ho tanteraka foana… ny fandeferana maraokana amin'ny haavony ambony indrindra. Nahavita zavatra ratsy tsy tambo ho isaina teo amin'ireo maraokana mpiray tanindrazana taminy i Driss Basri… Tena tsy misy zavatra tsara azo lazaina momba azy mihitsy.
Mirary azy handry am-piadanana i Najlae. 
Maty androany maraina tao Parisy i Driss Basri. Handry am-piadanana anie ny fanahiny. Izay ihany no azontsika iriana ho azy.
Sahisahy kokoa ilay blaogera Vagabondeuse  [Ang]:
Rehefa tena lasa mpanjakan'i Maraoka tamin'ny fomba ofisialy marina i Mohamed VI, voaroaka i Driss Basri. Nazava fa tsy nizara ny fideran'ny rainy an'i Basri ilay mpanjaka. Ankehitriny, maty i Driss Basri, ilay lehilahin'ny mistery sy fanafintohinana maro. Ho ohatra ho an'ireo manararaotra ny toerana ara-politika ao amin'ny firenena mba hahazoany izay rehetra tiany ho amin'ny tombontsoany manokana izy. Na izany aza, handry am-piadanana anie ny fanahiny.
Mizara hanihany malaza momba an'i Basri kosa i Morocco Time :
Maty tany Parisy androany i Driss Basri. Toa lehibe ilay fotoana ka tsy tokony hiheverana hanaovana hanihany izay nampijabaka [ny gazety] Nichane  tao anaty rano mampidi-doza tamin'ny taona farany teo:
”Maty i Driss Basri [minisitry ny atitany nankahalaina sy natahorana fatratra teo ambanin'ny fitondran'i Hassan II]. Miezaka ny mandrokiroky ny anjelin'ny fahafatesana izy mba hidirany any amin'ny paradisa. Tsy manaiky ireo anjely ary mamaly fa tsy afaka anaovana kolikoly ry zareo, noho izany hankany amin'ny helo izy. Teny amin'ny lalana mankany amin'ny helo, hitan'i Basri tany am-paradisa i Hassan II , tamin'ny fahagagany lehibe. Mihoraka izy : «Andriamanitro oh! Tsy hilaza amiko kosa ianareo fa tsy misy kolikoly aty ! ».
Na teo aza ireo teny tsara fanahy natolotry ny sasany, ny blaogera Ange Bleu  no tena mamintina tsara ny hevitra miparitaka indrindra, tamin'ny fanoratana fa :
Maty androany i Driss Basri, ilay lehilahy maherin'ny mpanjaka Hassan 2.
TSY MISY RESAKA.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/18/126687/
 nampijaly sy nanagadra olona an'arivony maro : http://www.liberation.fr/actualite/monde/274484.FR.php
 Blaogin'i Amina Talhimet : http://www.talhimet.com/index.php?2007/08/27/162-driss-basri-est-mort